ဘီအီးတခွက် သာခိုမမက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » ဘီအီးတခွက် သာခိုမမက်
Posted by ဂျစ်စူ on May 3, 2016 in Society & Lifestyle | 28 comments
သုံးရာတန် မီးသွေးထုပ်လေးတွေ ထုတ်ပြီး မီးသွေးသည်ကြီးက သူအိမ်ပြန်တဲ့အခါ
အဲဒီ မီးသွေးထုပ်လေးတွေနဲ့အမ်းစရာအကြွေလေးတွေကို
ဆိုင်မှာ ဒီတိုင်း ထားခဲ့တဲ့ သတင်းဖတ်မိကြမယ် ထင်ပါတယ်။
သင့်ကိုယ်ကျင့် တရားကို ကျုပ်ယုံတယ် ၊ မီးသွေး တစ်ထုပ်ယူရင် ငွေသုံးရာ
ပိုက်ဆံခြင်းထဲ ထည့်ခဲ့၊ အမ်းစရာ အကြွေလဲ လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုပြီး
ဆိုင်ရှင်က သူ အိမ်ခဏပြန်နားတဲ့အချိန်တိုင်း မီးသွေးတွေနဲ့ ငွေအကြွေတွေကို အဲသလို စိတ်ချလက်ချ
ထားခဲ့တယ်။ မီးသွေးဆယ်ထုပ် ထားခဲ့ရင် ဆယ်ထုပ်ဖိုး ပိုက်ဆံက ခြင်းထဲ အတိရှိတယ် ဆိုတဲ့သတင်းလဲ
နောက်ဆက်တွဲကြား ရတော့ စိတ်ထဲ တယ်ဟုတ်ပါလားပေါ့ဗျာ။
စီစီတီဗီ မရှိ အစောင့်မထားပဲ ဈေးဆိုင်ကို ထားခဲ့တာတောင် ခိုးဝှက်သူမရှိ ပိုယူသူမရှိ ကွက်တိရောင်းရတယ် ဆိုတော့
ဒီလူကြီး ဘစ်ဇနက် အားကျသလို ဈေးဝယ်သူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်လဲ ကြိတ်လေးစားမိပါရောဗျာ။
သက်သာလိုက်တဲ့ လုပ်ငန်း၊ ရိုးသားလိုက်တဲ့လူဒွေ ။
သူ့လိုပဲ မန်းလေးမှာလည်း အအေအေးသည်ကြီးက အအေးဗူးတွေ ရေခဲ့ပုံးထဲထည့်
ငွေအကြွေလည်း အဆင့်သင့်ထည့်ပြီး ဒီတိုင်းထားခဲ့တာ အပိုလိုမရှိ ကွက်တိ ရောင်းရဆိုတဲ့သတင်း
တနေ့ က ကြားမိပါရောဗျာ။ ဟား. လာပြန်ပဟ.တယ်နိပ်တဲ့ ဘစ်ဇနက်၊ တယ်ရိုးသားတဲ့လူဒွေ၊
အစောင့်မရှိ၊ လုံခြုံ ရေးကင်မရာ မထား ဈေးဆိုင်ဒီတိုင်းထားခဲ့တာတောင် မခိုးမ၀ှက် နဲ့ 
ရိုးသားကြပါလားကွယ်ရို့စိတ်ထဲ တဒင်္ဂ အား..ကျ .ချီးကျူး…မိ….မ…….လို………ရှိ……သေး..
စိတ်ထဲ အတွေးတစ်ခု ၀င်လာတာ လွယ်ရင် သူကြွယ်တောင် လက်မနှေး ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားကြီး
ဒီဆိုရိုးကြီး ပါးစပ်ယားထွင်ခဲ့ကြဟန်မရှိ။ တန်ဘိုးကြီးရင် မလွယ်တာတောင် သတ်ဖြတ် လုယက် ပျံပေးဆွဲနေတဲ့ခေတ်ကြီး။
ပထမတစ်ယောက်တော့ သာမန်ချီးကျူး မိလိုက်ပေမဲ့ ဒုတိယတခေါက်ကြားရတော့ ဆိုရိုးစကားကြီး စဉ်းစားမိသွားပြီ။
မီးသွေးထုပ်နဲ့အအေးပုံးကို မြို့ ၊ ရပ်ကွက်အနီး ထားပြီး ကိုယ်ကျင့်တရား စမ်းတော့ ဘယ်လိုလုပ်
ပြီးတောအလစ်ချောင်းပြီး အချောင်ယူရအောင်လဲ မီးသွေး နဲ့အအေးဗူး ဆိုတာ နှစ်ရာ သုံးလေးရာ ၀န်းကျင် ဟူ၍ ဆင်ခြင်မိပြီး
ဤ ဒုတိယအကြိမ်မတော့..ကျနော် အူးမြောက်မြောက်သည် အနှီဥာဏ်ကြီးရှင်တို့ အား
အားလဲ မကျတော့ဘူး ချီးလဲ မကျူးတော့ဘူး။
ဈေးသည် “ငပျင်း”၊ သူခိုး “မလစ်လို့ ၊ တန်ဘိုးမရှိလို့ ” ဟူ၍ပဲ။ ။
မောင်ရင်က ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေကို အထင်သေးအမြင်သေးနဲ့…
မယုံရင် ဘီအီးငါးလုံးနဲ့ ကြွက်ကြော်တစ်ပန်းကန် ထင်းရူးသေတ္တာပုံးပေါ်တင်-
(ဘီအီးတစ်လုံးတစ်ထောင်နှုံးနဲ့ ပိုက်ဆံဗူးထဲ ထည့်ခဲ့ပါ။ ကြွက်ကြော်အခမဲ့လက်ဆောင်ပါ)လို့ စာရေးထားခဲ့ကြည့်..
စော်ဒဂါး မော်ဒဂါးလုပ်နဲ့ 
တားဘကျီးက ဘလက်နဲ့ငါးရှဉ့်မြေအိုးဘဲကြိုက်ဒါ
တခါတုန်းက မှတ်တိုင်နားမှာ စက်ဘီးစီးလာတဲ့သူရဲ့ ခါးပုံအိတ်ထဲကနေ ပိုက်ဆံထောင်တန်တွေ ထွက်ကျ လာတယ်……မှတ်တိုင်ကသူတွေ လှမ်းအော်တော့ ပြန်လှည့်လာပြီး လမ်းပေါ်ပြန့်ကျဲနေတဲ့ပိုက်ဆံတွေ လိုက်ကောက်တာပေါ့….မှတ်တိုင်မှာကားစောင့်နေတဲ့သူတွေကလည်း ဝိုင်းကောက်ပေး..တချို့တွေကတော့ အိတ်ထဲထည့်ကျတာပေ့ါ…….လိုင်းကားပေါ်ကသူတွေကလည်း ဝိုင်းကောက်နဲ့……အနားကသူတွေက ပိုင်ရှင်က ဒီမှာဆိုပြီး ပြောတာတောင် ခပ်တည်တည်နဲ့ကောက်နေကြတာ……..၄၅ ဟိုင်းလပ်ကားခေါင်းခန်းမှာ မျက်မှန်ကြီးနဲ့ ရုပ်ခန့်ခန့်ယောင်္ကျားကြီးကလည်း ခေါင်းခန်းကနေ ခဏဆင်းပြီး ပိုက်ဆံဆင်းကောက်ပြီး ပိုင်ရှင်သိရဲ့သားနဲ့ ပြန်မပေးဘဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ကားပေါ်ပြန်ထိုင်နေလေရဲ့…..
2002 လောက်ကဖြစ်မယ်ထင်တယ်…..ပိုင်ရှင်ဘယ်သူဆိုတာလည်းသိရဲ့သားနဲ့ အချောင်လိုချင်တဲ့သူတွေ အများကြီးတွေ့လိုက်ရတယ်……….
ကျနော်က မိုးသီးကြွေရင် ကောက်ပြီး ရန်ကုန်မှာ ရေခဲခြစ်ရေင်းမှာ
တဂျီးလဲ အမေဒီကန်မှာ ရေခဲထုပ်ရောင်း
ဖဘမှာလည်း ဒေါ်ဒေါ်ပဒုမ္မာအပါအ၀င်.. ဗမာတော်တော်များများက.. ရာသီဥတုဖေါက်တာ.. လူတွေစိတ်ထားဘာညာဆိုပြီး ဘုန်းကြီးစကားကိုးကားထားတယ်..
ကျုပ်ကလည်း.. ရွတ်ြပီး.. ရှေးစကားတင်ပေးထားတယ်..။
တကယ်က ..အဲလိုတွေးတာကိုက.. အူကြောင်ကြားကြီး..။ ရှေးက ငလျှင်လှုပ်ရင်ပဲ.. တန်ခိုးကြီးလူပဲမွေး/သေသလို.. နဂါးပဲနိုးသလိုလို.. အဲဒါနဲ့သဘောတူတူပဲ..။
ဘာသာရေးမှိုင်းမိနေကြမှန်း.. သိပ်သိသာ.. ။
အာဖရိကတိုက်.. တန်ဇန်းနီးယားပြည်.. မြောက်ဖက်စွန်းက.. သစ်တော်ကြိုးဝိုင်းရဲ့ အမြင့်ဆုံးသစ်ပင်ထိပ်က…. ငှက်သိုက်..။
အဲဒီငှက်သိုက်ထဲက.. ငှက်ပေါက်စလေး.. ပါးစပ်ဟပြီး ကျိကျိ.. ၂ခါအော်လိုက်လို့.. .. မြန်မာပြည်မယ်.. မိုးသီးအကြီးအကျယ်ကြွေတယ်..။
အကျိုးအကြောင်း.. အဆက်အစပ်.. အဲဒါပဲ..။
အစိမ်းရောင် သစ်ပင်သစ်တော ပြုန်းတာ လူ တွေ ရဲ့ လောဘ မဟုတ်လို့ ဘာကြောင့်တုန်း။
သူ့ဟာသူ ခြေပေါက်ပြီး ထွက်ပြေးကြတယ်လား မသိ။
ဘသူလာလာ မကြောက်နဲ့ 
အဲသဟာထက် ဆိုးတာ ရှိတယ်… ဖွင့်ပွဲတခုမှာပေါ့… ရာထူးကြီး ဟိတ်ဟန်တခွဲနဲ့ ဆရာကြီးက ပိုက်ဆံကြဲဖို့ တာဝန်ယူထားပါတယ်… ဖလားက သူ့လက်ထဲမှာ… တကယ်တမ်း ကြဲတော့ … အဟင့်… အတန်သေးတွေ အပြင်ကို ကြဲပြီး အတန်ကြီးကို သူ့နားကြဲ ဖိနပ်နဲ့ ဖိထားတယ်… တား လဲ နားကို မလည်နိုင်တော့ဘူး…
ရပ်ကွက်ထဲကအလှူတစ်ခုကတော့ ၂၀တန်လေးမှာ ရွှေထည့်ပြီး ကြဲတာ…ဘယ်သူမှ မကောက်ကြဘူး…
အဲဒီသတင်းကိုကြားပြီး အမျိုးမျိုး ကွန်မန့်တွေ ပေးကြတယ်။
ကိုယ်သာဆို အဲလိုရောင်းမလားလို့ ကိုယ်ချင်းစာတဲ့အနေက ၀င်ကြည့်လိုက်တော့…… မရောင်းဘူး လို့ အဖြေထွက်တယ်။
ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းလာစေချင်တဲ့စေတနာက မှန်ပေမယ့် ………………….
လူတွေရဲ့ mind-set ကို ပြုပြင်ဖို့ ဒီနည်းလမ်းက မဟုတ်သေးဘူးလို့ထင်တယ်။
မီးသွေးဆိုရင်တော့ နာ ခိုးဖြစ်မယ်ထင်တယ်..
ဒီမှာ တတောင် လောက် မရှိအိတ်လေးကို ၃ ဒေါ်လှ ကျော်ကျော် ပေးဝယ်ရတာ..
ဘာဘီကျူတစ်ခါစားရင် မီးသွေး ဝယ်ရတာတင် ၁၅ ဒေါ်လှလောက် ကုန်တယ်…
သူများနိုင်ငံတွေ သတင်းစာ အဲဒီပုံရောင်းနေတာဖြင့် ကြာလှပြီ။ တကယ်ဆိုရင် ဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်ဟာ အလုပ် ဟူသမျှထဲမှာ အမိုက်မဲဆုံးအလုပ်လို့ ထင်တယ်။ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းတာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို မိုးလင်းမိုးချုပ် ဆိုင်မှာ ထိုင်ပြီး ရောင်းပစ်လိုက်တာ။ ဘ၀အရည်အသွေးဆိုတာကို ဘာလို့ ထည့်မစဉ်းစားရမှာလဲ။ အခု လို ငွေယားကလေးအတွက် ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးရောင်းရမယ်ဆို ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေက ပိုနှမျောစရာကောင်းတယ်။
အဲထက် ပိုနှမြောစရာကောင်းတာဂ ရောင်းသူမဲ့ ဆိုင်ဆိုဘီး
အချိန်ကုန်ခံဘီး စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ လူတစ်အုပ်ရဲ့ တန်ဘိုးကျီး အချိန်တွေပါ အဒေါ်
ထိုင်ရောင်းရင် တစ်ယောက်ပဲ အချိန်ပေးရမှာ ထိုင်မရောင်းတော့ မဆိုင်သူတွေပါ အချိန်ထပ်ပေးရကော
စောင့်မနေနဲ့စမ်းမနေနဲ့လစ်ရင် ယူသွားလိမ့်မယ် မလစ်ရင် ပိုတောင် ပေးသွားဦးမယ်
နံကြားထောက်ပြောမယ် နောင် နှစ်တထောင်
အဒေါ်ကသာ ဈေးရောင်းတာ မိုက်မဲတယ်လုပ်နေတာ
ဈေးရောင်းပြီး ရွှေတွဲလွဲ ငွေတွဲလွဲ သားသမီး ပညာသင် နိုင်ဂံဂျားပို့လှူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့ ဈေးသည်တွေ ဒဗုန်ကြီး
သိသလောက်တော့ တန်ရာတန်ကြေး အချိန်ပေးဆပ်ပြီး ထိုင်ရောင်းမှ ရခဲ့တဲ့ ရလာဒ်တွေ
ပြီးဒေါ့ သူဒို့ အရည်ချင်းနဲ့ ဒီလိုမပေးဆပ်လို့အဲကွန်းခန့်ခန့် ဝင်ထိုင် စာကြီးပေကြီးဖတ် အလုပ်ကြီးကိုင်ကျီးလုပ်ဖို့ 
မဖြစ်နိုင်လေဒေါ့ ဈေးမှမရောင်းရင် နေပူထဲ ပန်းရံသယ် စပယ်ယာလိုက် ခြံစောင့် စတဲ့အလုပ်မှတပါး
အခြား ဂွင်ကောင်းကောင်းလေးများရှိရင် အလင်းပြပါ အဒေါ်
ဟုတ်ပါ့ ဒီတစ်ခါ မျောက်ကို ဆရာတင်လိုက်ပြီ။
ဒါမှ မဟုတ် သုံးရာတန်ကို တစ်ရာထဲ ထားသွားတာ
ကလိန်ကကျစ်က မပေးဘူးဆို ဘီလိုရှင်းမလဲ
ဘယ်အုပဒေနဲ့ရှင်းမလဲလို့ 
ဒီရာသီ မီးသွေးက ပြဿနာမရှိ
အအေးတို့ဘာဒို့ က ကြာရင် အရင်းပြုတ်နိုင်တယ်
မစိုးမိရင် ကျွဲရိုင်းလေး ဘာလေး ထည့်ထားပေးကျိ
ကျော်က နည်းရင်မယူဘူး အဲ ဟုတ်ပါဘူး လစ်မှယူမှာ
သူများ နိုင်ငံ တွေမှာ သူခိုး နဲ တယ် ဆိုတာက အလွယ် ယူလို့ မရအောင် နည်းလမ်း၊ စည်းကမ်း တွေ ကောင်းလို့ပါ။
မ တရာသား တွေ စိတ်ရောင်စုံ မို့ စုံးပြူး တွေကတော့ နေရာ တကာ နိုင်ငံတိုင်း အနှံ့ရှိမှာပါ။
ငတ် နေတဲ့ နေရာ မှာ ပိုပြီး ဆိုးတော့ မပေါ့။
စိတ်ဓာတ်ပြင်ချင်ရင် အရင် လူတွေ ကို အရှက်တရား (ကိုယ့်ကို လူတွေ က စာရိတ္တမခိုင်သူ လို့ မြင်မှာ) နဲ့ အကြောက်တရား (မဟုတ်တာ လုပ်ချိန် တရားဥပဒေ က စောင့်ပြီး အရေးယူမှာ) ရှိဖို့ အရင် ပညာပေးရ မယ် ထင်တာပါဘဲ။
ဒီမှာလဲ စီစီတီဗီ တွေ အနှံ့ထားတာ အလကားမှ မဟုတ်တာ။
လူတွေထဲ က တစ်ချို့ ကို မယုံလို့ပေါ့။
လူမျိုး နိုင်ငံရယ်နဲ့ မဆိုင်
မျက်ကွယ်ရာ လူကောင်းရှိမယ် သာခိုရှိမယ်
ဒွန်တွဲနေတာ လစ်ရင် ပါမှာပဲ
အရင်းတင်မဟုတ် အဖျားပါ ငုတ်စိမကျန်ဖြစ်မှာ
နောက်နေ့ သာခို ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာ
မျောက်ပါဆို မျောက်စိတ်ပေါ့ အဒေါ်ရာ
(လူတွေ ကို အရှက်တရား (ကိုယ့်ကို လူတွေ က စာရိတ္တမခိုင်သူ လို့ မြင်မှာ) နဲ့ အကြောက်တရား (မဟုတ်တာ လုပ်ချိန် တရားဥပဒေ က စောင့်ပြီး အရေးယူမှာ) ရှိဖို့ အရင် ပညာပေးရ မယ် ထင်တာပါဘဲ။)
အဲလိုပြုပြင်မှရမှာကို အခုလိုလုပ်နေတာက စောနေသလား၊ မှားနေသလားလို့။
စိတ်ဓာတ်ပြင်ချင်ရင် ယာဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်တန်းဖွင့်လေ
ဒါမှမဟုတ် ရောင်းသူမဲ့ ဘီယာဆိုင်ဖွင့်
ဟန်းစက်တို့ အဝတ်အထည်တို့ကို..အဲ့နည်းနဲ့ ချရောင်းလို့ကတော့….
အအေးတစ်ဗူး သုံးရာလောက်က… ပန်းရံလုပ်တဲ့သူလည်း ခိုးဝှက် သောက်ရလောက်အောင်..
.ငွေများများပေးမှ ရမယ့်ဟာတွေကို အဲ့လိုချပေးထားကြည့်ရင်… စိတ်ဓါတ်မကောင်းသူတွေ ပေါ်လာလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်းလို့…ထင်မိ…
အန်တီမမနဲ့ သဘောချင်း တူပါကြောင်း…